News - The ẹdude technology nke akpa akpa FIBC ọnwụ igwe nwere ndị na-esonụ nsogbu
Teknụzụ dị na akpa akpa akpa ihe igwe FIBC nwere nsogbu ndị a
A na-amarakwa igwe ihe eji egbu FIBC akpa akpa akpa, akpa ton, akpa ohere, wdg. Akpa akpa jupụtara akpa akpa na-agbanwe agbanwe, nke a makwaara dị ka nnukwu akpa na akpa nkwakọ akpa. Ọ bụ ụdị nke rọrọ na mgbanwe nkwakọ akpa, na ọ bụ nnukwu ibu iga akpa mere nke foldable nrapado teepu, resin nhazi ákwà na ndị ọzọ na juu ihe. A na-ejikarị extrusion eme polypropylene ma ọ bụ polyethylene, ịcha, ịbịaru, ịkwa akwa, ịkpụ na ịkwa akwa. Kinddị mbukota a abụghị naanị uru maka mmelite nke ibudata na ibudata arụmọrụ, kamakwa ọ kwesịrị ekwesị maka nkwakọ ngwaahịa nke nnukwu ntụ ntụ na ngwongwo granular. Ọ nwere ike ịkwalite nhazi na ntinye nke nkwakọ ngwaahịa buru ibu, belata ọnụ ahịa njem, ma nwee uru nke nkwakọ ngwaahịa dị mma, nchekwa na ọnụ ala. Ọ dị mma karịsịa maka ọrụ igwe. Ọ bụ ezigbo nhọrọ maka nchekwa, nkwakọ ngwaahịa na njem. Enwere ike iji ya mee ihe n'ụzọ, okporo ụzọ na njem ụgbọ mmiri nke nnukwu ihe ndị dị ka simenti, fatịlaịza, nnu, shuga, ngwa kemịkal, ores na ihe ndị ọzọ. Ya mere, na-adịbeghị anya, akpa akpa na-ọtụtụ-eji ibufe ntụ ntụ na granular ngwongwo na ụwa. Ọdịdị na ntinye nke akpa akpa bụ mgbanwe mgbanwe dị n'okporo ụzọ na-ebudata na ibudata ntụ ntụ na ngwongwo granular.
Teknụzụ dị ugbu a nwere nsogbu ndị a: mgbe etinyere akụrụngwa ịcha akwa maka nhazi akpa akpa, enwere nsogbu na akwa akwa nke akpa akpa akpa anaghị edozi nke ọma mgbe ị na-egbutu ya, na-ebute nsogbu dị mma nke ịkwa afụ, ma n’otu oge ahụ, akwa akpa ahụ na-ebugharị nwere ike ịdị jụụ n’oge akpacha ajị, na-ebute mmụba nke nha na nbelata ogo.
Utdị ịba uru na-enye ihe eji egbu ihe eji eji akwa ákwà maka akpa akpa akpa, nke nwere njirimara nke usoro dị mfe, mkpebi siri ike na esemokwu dị mma.
Iji mezuo ebumnuche ahụ dị n'elu, ụdị ịba uru ahụ na-enye atụmatụ teknụzụ na-esonụ: akụrụngwa ịcha akwa maka nhazi akpa akpa, nke gụnyere ihe na-eme mkpọtụ, tebụl nhazi na akụrụngwa. A na-edozi ngwụcha ngwụcha nke tebụl a na-eji arịọnụ, a na-enye ngwụcha ngwụcha nke ngwe ahụ na mpịọkụ na-ada ụda n'akụkụ abụọ, a na-etinye etiti etiti arịọnụ na tebụlị telescopic, na njedebe dị ala a na-edozi piston nke telescopic cylinder na mbepụ A na-enye ngwụcha ala nke tebụl na-arụ ọrụ ụgbọ ala, a na-enye etiti nke elu nke tebụl nhazi ihe eji arụ ọrụ, na akụkụ abụọ nke akụkụ ahụ edozi bụ ofu na a ebu ala.